Accueil > Gazetin'ny nosy > Lalàm-pifidianana: Raikitra ny rotaka tao Tsimbazaza
Lalàm-pifidianana: Raikitra ny rotaka tao Tsimbazaza
Raikitra tokoa ny rotaka teo amin’ny governemanta sy ny solombavambahoaka omaly faha 13 martsa 2018 nandritra ny fivoriam-baomiera sy ny governemanta notarihin’ingahy Solonadrasana Olivier Mahafaly. Fandinihana sy fitondram-panazavana hataon’ny minisitra sy ny teknisianina voakasika ny volavolan-dalàna mahakasika ny fifidianana 2018 no tao anatin’ny fandaharam-potoana tamin’ izany. Ny governemanta manontolo nefa no tonga hiatrika ity fotoana ity. Nanomboka teo dia efa nimenomenona ny depiote raha naheno izany ary efa maro no tezitra. Tsy navela hatrehan’ny olona hafa koa ny fivoriana fa ny mpikambana ao amin’ny governemanta sy ny depiote ihany hono. Nahatezitra ireto depiote ireto koa izany ka na dia mbola tsy nanomboka aza ny fivoriana dia efa re tetsy sy teroa fa tsy hanaiky izao fandikan-dalàna izao izy ireo.
Tsy neken’ireo depiote ny fanatrehan’ireo minisitra tsy tokony hiatrika ity fivoriana ity. Koa rehefa tsy nety nivoaka ny efi-trano ireo minisitra ireo dia nangataka ny mpanao gazety hahazo hanatrika ny fivoriana koa ireo depiote maro.
Nanomboka teo no nitranga ny gidragidra satria ny depiote HVM izay mpomba ny fanjakana dia nanizingizina fa tsy ilaina hanatrika ny fivoriana ireo mpanao gazety. Ankilany indray dia tsy nanaiky ny tsy mpomba ny fanjakana fa avelao izy ireo hanatrika ity fivoriana ity mba hahazoan’ny vahoaka ny vaovao satria lazain’izy ireo fa zava-dehibe loatra amin’izao fotoana izao ny lalàm-pifidianana.
Niakatra ambony be ny korontana tao anatin’ny biraom-pivoriana ka voatery nosokafana ny varavarana. Nahita ny ady be tao an-trano ny mpanao gazety dia niezaka naka sary sy nihaino. Tamin’izany indrindra no nisy nampiditra ireto mpanao gazety ireto. Tena sakoroka toa ny teny an-tsena ireny no zava-nisy. Mifampivazavaza, mihorakoraka, mifanaraby ary tsy misy mety milefitra ny andaniny sy ny ankilany fa samy nandray fitenenana avokoa.
Nitambatra ny depiote Mapar miaraka amin’i Andry Nirina Rajoelina sy ny TIM miaraka amin’i Marc Ravalomanana ka tsy nanaiky ny hevitra ny HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara) sy ny mpomba azy izay manohana an’i Hery Rajaonarimampianina.
Nanomboka teo dia efa nivoaka sy niditra ny trano fivoriana ireo solombavambahoaka. Tonga koa ny mpitandro ny filaminana nandamina nefa noroahin’ireo depiote satria hono tsy raharaha miaramila no atao ao fa raharahan’ny mpitondra. Niala maina ireo miaramila ireo.
Voatery noravan’ingahy Mahazoasy izay nitarika ny fivoriana ny raharaha rehefa tsy hita izay filaminana ka nahemotra tamin’ny telo ora tolakandro indray. Tamin’izany no navadika ho fivoriana azon’ny rehetra natrehana indray ilay fivoriana nihiboka tsy azo natrehan’ny olon-kafa.
Fa tsara ihany koa ny ahafantarana ny resak’ireo depiote ireo tao alohan’ny fivoriana. Nisy ny famoriana depiote maromaro izay nokasain’ny governemanta ho tanterahana tany Mantasoa hono ny alatsinainy faha 12 martsa 2018 teo. Tokony hanomboka tamin’ny dimy ora hariva izany nefa tsy raikitra fa niandrasana ny omaly talata aorian’ny fivoriana. Mandeha dia mandeha ny resaka amin’izany fa fanasana loha sy fanambazana vola hono no hitranga amin’izany. Misy koa nefa no depiote izay milaza fa tsy naheno ity raharaha ity satria efa mazava hono ny fijeriny fa tsy hanaraka ny toro-marika homen’ny governemanta.
Vita omaly ny fanazavana pôlitika nataon’ny praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly, fa ny alakamisy izao indray no hisy ny fanazavana ara-teknika. Milaza fa tsy hanaikinaiky foana toa ny teo aloha ireo depiote.
Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ny andaniny sy ny ankilany amin’ity raharaha ity satria miankina amin’ny lalàm-pifidianana no mety ho mbola hahalany na tsia azy rehetra ireo.
Endrika ny korontana hitranga eto amin’ny firenena iny hita omaly tao Tsimbazaza iny ka raha tsy mitandrina ny fanjakana dia tsy maintsy miditra amin’ny krizy vaovao indray ny Malagasy.